ဒေါ်နယ်ထရမ့် (Donald Trump) နဲ့ ကင်ဂျုံအန် (Kim Jong-un) တို့ စင်ကာပူမှာ တွေ့ဆုံမယ်
11 May 2018 . 12:18 PM
အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့် (Donald Trump) နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန် (Kim Jong-un) တို့တွေ့ဆုံပွဲကို ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံပွဲကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ဖို့အတည်ပြုသတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမယ့်သတင်းကို ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားဖော်ပြထားတာပါ။ ကင်ဂျုံအန်နဲ့သူ့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို စင်ကာပူမှာကျင်းပသွားမယ်လို့ပြောထားပြီး ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်အောင် နှစ်ဖက်စလုံးကြိုးစားကြမှာပါလို့ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက်ကင်မ်က ထရမ့်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မတ်လအတွင်းမှာပဲ ဒီဖိတ်ကြားစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲဟာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တာကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးက အာရုံစိုက်ခံရတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ဘက်ကတော့ ဒီတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပမယ့်နိုင်ငံကို အချိန်ယူစဉ်းစားခဲ့ကြပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စစ်မဲ့ဇုန်၊ ဒါမှမဟုတ် မွန်ဂိုနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့ ရည်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ သူဟာကြားနေနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင် တရုတ်၊ ရုရှားလိုမျိုးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေအဖြစ် အမြင်မသက်ရောက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့တည်နေရာအနေအထားဟာလည်း နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အဆင်ပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်မ်ဟာ သူ့ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကနေတဆင့် စင်ကာပူကိုဦးတည်ပျံသန်းလာမှာဖြစ်ပြီး မြို့တော်ပြုံယမ်းကနေ မိုင် သုံးထောင်ကျော် ပျံသန်းလာမှာပါ။ ထရမ့်အနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတည်းက ဒီဆွေးနွေးပွဲအတွက် အချိန်နဲ့နေ့ရက်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုလက်ခံကျင်းပပေးမယ့်နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိနေကြောင်းကိုလည်း တွစ်တာကနေပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်း (Lee Hsien Loong)
စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်း (Lee Hsien Loong) ကတော့ စင်ကာပူအနေနဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံကျင်းပခွင့်ရခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အောင်မြင်မှုတွေရပါစေကြောင်းကိုလည်း ထရန့်ရဲ့ကြေညာချက်အောက်မှာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီတွေ့ဆုံပွဲအတွက်အတည်ပြုခြင်းဟာ အမေရိကန်အကျဉ်းသား သုံးယောက်ကို မြောက်ကိုရီးယားကလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်လာတဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေကြောင့် လက်ရှိကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ထူးခြားမှုတွေဖော်ဆောင်လာဖို့ကို မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။
ထရမ့်အနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းအသစ်တွေစတင်ပါမယ်။ လက်ရှိအနေအထားဟာအဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝတဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် ကောင်းသောအခြေအနေဘက်ကို ဦးတည်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာတော့ ဘယ်လိုသဘောတူညီချက်တွေချမှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဘယ်လိုပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
Photo Credit – Getty Images, Times
ဒျေါနယျထရမျ့ (Donald Trump) နဲ့ ကငျဂြုံအနျ (Kim Jong-un) တို့ စငျကာပူမှာ တှဆေုံ့မယျ
အားလုံးစိတျဝငျစားနကွေတဲ့ တှဆေုံ့မှုတဈခုဖွဈတဲ့ အမရေိကနျသမ်မတဒျေါနယျထရမျ့ (Donald Trump) နဲ့ မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျ ကငျဂြုံအနျ (Kim Jong-un) တို့တှဆေုံ့ပှဲကို ဇှနျလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာကငျြးပသှားမယျလို့သိရပါတယျ။ သူတို့ရဲ့တှဆေုံ့ပှဲကို စငျကာပူနိုငျငံမှာ ပွုလုပျဖို့အတညျပွုသတျမှတျလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီတှဆေုံ့ပှဲကငျြးပမယျ့သတငျးကို ဒျေါနယျထရမျ့ကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားဖျောပွထားတာပါ။ ကငျဂြုံအနျနဲ့သူ့ရဲ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကို စငျကာပူမှာကငျြးပသှားမယျလို့ပွောထားပွီး ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျထူးခွားမှုတဈခုဖွဈအောငျ နှဈဖကျစလုံးကွိုးစားကွမှာပါလို့ ရေးသားထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီဆှေးနှေးပှဲအတှကျကငျမျက ထရမျ့ကိုဖိတျကွားခဲ့တာဖွဈပွီး မတျလအတှငျးမှာပဲ ဒီဖိတျကွားစာကိုလကျခံရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုကငျြးပမယျ့ဆှေးနှေးပှဲဟာ အမရေိကနျသမ်မတနဲ့မွောကျကိုရီးယားခေါငျးဆောငျရဲ့ ပထမဆုံးတှဆေုံ့မှုဖွဈတာကွောငျ့ တဈကမ်ဘာလုံးက အာရုံစိုကျခံရတဲ့ဆှေးနှေးပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျဘကျကတော့ ဒီတှဆေုံ့ပှဲကငျြးပမယျ့နိုငျငံကို အခြိနျယူစဉျးစားခဲ့ကွပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့စဈမဲ့ဇုနျ၊ ဒါမှမဟုတျ မှနျဂိုနိုငျငံမှာကငျြးပဖို့ ရညျမှနျးထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့နောကျဆုံးမှာတော့ စငျကာပူနိုငျငံမှာ ကငျြးပဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့ကွတာပါ။
စငျကာပူနိုငျငံကိုရှေးခယျြရတဲ့အကွောငျးကတော့ သူဟာကွားနနေိုငျငံဖွဈတဲ့အပွငျ တရုတျ၊ ရုရှားလိုမြိုးကှနျမွူနဈနိုငျငံတှအေဖွဈ အမွငျမသကျရောကျတဲ့နိုငျငံဖွဈနတောကွောငျ့ပါ။ စငျကာပူနိုငျငံရဲ့တညျနရောအနအေထားဟာလညျး နှဈဖကျလုံးအတှကျ အဆငျပွလေို့ဖွဈပါတယျ။ ကငျမျဟာ သူ့ကိုယျပိုငျလယောဉျနဲ့ တရုတျနိုငျငံကနတေဆငျ့ စငျကာပူကိုဦးတညျပြံသနျးလာမှာဖွဈပွီး မွို့တျောပွုံယမျးကနေ မိုငျ သုံးထောငျကြျော ပြံသနျးလာမှာပါ။ ထရမျ့အနနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျကတညျးက ဒီဆှေးနှေးပှဲအတှကျ အခြိနျနဲ့နရေ့ကျကိုသတျမှတျခဲ့တာဖွဈပွီး ဒီဆှေးနှေးပှဲကိုလကျခံကငျြးပပေးမယျ့နိုငျငံတှေ အမြားကွီးရှိနကွေောငျးကိုလညျး တှဈတာကနပွေောခဲ့ပါသေးတယျ။
စငျကာပူဝနျကွီးခြုပျလီရှနျလှနျး (Lee Hsien Loong)
စငျကာပူဝနျကွီးခြုပျလီရှနျလှနျး (Lee Hsien Loong) ကတော့ စငျကာပူအနနေဲ့ ဒီဆှေးနှေးပှဲကို လကျခံကငျြးပခှငျ့ရခွငျးအတှကျဝမျးမွောကျပါကွောငျး၊ ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ အရေးပါတဲ့ခွလှေမျးဖွဈပါကွောငျး၊ အောငျမွငျမှုတှရေပါစကွေောငျးကိုလညျး ထရနျ့ရဲ့ကွညောခကျြအောကျမှာ ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
ဒီတှဆေုံ့ပှဲအတှကျအတညျပွုခွငျးဟာ အမရေိကနျအကဉျြးသား သုံးယောကျကို မွောကျကိုရီးယားကလှတျမွောကျခှငျ့ပေးလိုကျပွီး ရကျပိုငျးအတှငျးမှာပဲ ဖွဈလာခဲ့တာပါ။ ဒီလိုအကောငျးဘကျကိုဦးတညျလာတဲ့ဖွလြှေော့မှုတှကွေောငျ့ လကျရှိကငျြးပမယျ့ဆှေးနှေးပှဲမှာလညျး ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျထူးခွားမှုတှဖေျောဆောငျလာဖို့ကို မြှျောမှနျးထားကွပါတယျ။
ထရမျ့အနနေဲ့လညျး ကြှနျတျောတို့ခွလှေမျးအသဈတှစေတငျပါမယျ။ လကျရှိအနအေထားဟာအဓိပ်ပါယျပွညျ့ဝတဲ့ အခှငျ့အရေးကောငျးတဈခုပါ။ ဒါကွောငျ့ ကောငျးသောအခွအေနဘေကျကို ဦးတညျမယျလို့ ပွောကွားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဇှနျလ (၁၂) ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပမယျ့ဆှေးနှေးပှဲအပွီးမှာတော့ ဘယျလိုသဘောတူညီခကျြတှခေမြှတျပွီး ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျဘယျလိုပွောငျးအလဲတှပွေုလုပျသှားမလဲဆိုတာ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။
by 2B .2hours ago